Tue, Jan 28, 2020 at 12:04am
बाँके, २८ असार ।
एक सातादेखि लाखौं मूल्यको औषधि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा थन्किएपछि कर्णाली प्रदेशको दुर्गम डोल्पाका विरामीको विचल्ली परेको छ ।
नेपालगञ्जबाट जुफालका लागि हवाई उडान अवरुद्ध भएका कारण उक्त औषधि नेपालगञ्जमै थन्किएको हो । औषधि यही थन्किएपछि अहिले डोल्पा अस्पतालमा सिटामोलको समेत अभाव देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
जुफाल विमानस्थल चार दिनदेखि नखुलेकोले नेपालगञ्जदेखि जुफाल उडान हुन नसकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर बताए । मौसममा खराबी आएर जहाजले उडान भर्न नसकेपछि बिमानस्थल बन्द भएको उनले बताए । दुई सातादेखि अस्पतालमा ३० जनाभन्दा धेरै बिरामी भर्ना गरिएका छन् ।
औषधि अभाव हुन थालेपछि माथिल्लो निकायमा माग गरिएको औषधि नेपालगञ्जमै थन्किएको निमित्त अस्पताल प्रमुख डा. सिजन रावलले बताए । ‘हरेक दिन बिरामी थपिइरहेका छन्, भुँइमा बिरामी राखेका छौँ, तर औषधिको पीरलो भइरहेको छ’, डा. रावलले भने, ‘यदि औषधि सकियो भने अन्य कुनै पनि विकल्प डोल्पामा छैन, निकै चिन्तित भएका छौँ ।’
मौज्जात औषधि सकिँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ । विमानस्थलमा चार दिनदेखि बाक्लो हुस्सुले ढाकेको छ । दैनिक उडानको आसमा बसेका यात्रु समेत मर्कामा परेका छन् । मौसममा खराबी आएपछि नेपालगन्जबाट उडान भर्दै आएका तारा, गोमा, नेपाल एयरलाइन्सलगायतका सरकारी तथा निजी विमान कम्पनीले उडान भर्न नसकेको समिट एयरका स्टेशन इञ्चार्ज पूर्णजङ्ग शाहीले बताए ।
काेराेना भाइरसकाे प्रकाेप : चीनबाट आउने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विमानस्थलमा हेल्थ डेक्स स्थापना
यसरि बुझौं शरीरको भाषा
अमेरिका पुग्यो चीनमा ९ जनाको ज्यान लिएको कोरोना भाइरस
तेब्बर गतिमा फैलिँदै चीनमा कोरोना भाइरस